Vaovao - Ny refy, ny fitomboana, ny famakafakana ary ny vinavina 2030 momba ny indostrian'ny mpamokatra ambony indrindra amin'ny swab fitaterana eo anelanelan'ny tsena
Ny fitomboan'ny tranga COVID-19 manerantany sy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fitiliana any amin'ny laboratoara no tena mamporisika ny fampiasana swab vaovao sy ny fampitam-baovao momba ny virus. Ankoatr'izay, ny masoivohon'ny governemanta dia manery ny fankatoavana haingana ny vokatra eny an-tsena mba hidirany amin'ny tsena malalaka. Ireo fironana ireo dia hanohana ny tsenan'ny media fitaterana swab sy virus mandra-pahatapitry ny areti-mandringana.
Mandritra ny vanim-potoana manomboka amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2030, ny tsenan'ny fampitam-baovao swab sy virus dia antenaina hitombo miadana amin'ny tahan'ny fitomboana 1,2% isan-taona. Ny fitomboan'ny trangan'ny areti-mifindra sy ny fitomboan'ny tanàna marobe dia be indrindra ny fangatahana swab sy media de virus. Na dia efa tapitra aza ny valanaretina, fanavaozana araka ny tokony ho izy, valiny haingana, ary fanamorana ny fampiasana Izy io koa dia hanome fanohanana ho an'ny indostria.
"Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nankatoavin'ny US FDA ny fampiasana swab synthetic ho an'ny fitsapana coronavirus. Io dia ahafahan'ny marary mety hizaha toetra ny tenany, amin'izay hampihena ny fihanaky ny viriosy amin'ireo mpitsabo matihanina. Ho fanampin'izay, ny mpamokatra dia mamolavola fatratra ny swabs polyester mba hanomezana fahafaham-po ny fitomboan'ny fangatahana diagnostika COVID-19, "hoy ny mpandinika ny FMI.
Ireo mpanamboatra media lehibe momba ny fitaterana swab sy virus dia sahirana amin'ny fanarahana ny filana lehibe manerantany. Na eo aza ny famatsiam-bola sy ny fanampiana ara-bola ataon'ny governemanta, na dia miezaka mampitombo ny vokatra aza ny mpamokatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny tsena ny tsy fahampiana. Ho fanampin'izay, ny savony ampiasaina amin'ny fitsapana COVID-19 dia mitaky endrika sy fitaovana miavaka, izay hisy fiantraikany amin'ny vinan'ny tsena.
Ny fanakorontanana ny rojom-bary famatsiana akora toy ny plastika sy ny reagents dia misy fiantraikany amin'ny fisian'ny swab sy media fitaterana virus any amin'ny hopitaly sy tobim-pitsaboana. Noho izany, mitantana ireo loharanom-pamokarana ny governemanta mba hamaly ny filan'ny fitiliana ankehitriny. Etsy ankilany, ny fangatahana avo lenta amin'ny vokatra mifandraika amin'ny COVID-19 dia misy fiatraikany amin'ny swab sy ireo media virus fitaterana aretina hafa, ka misy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny tsena. Ny fifehezana ny areti-mandringana dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny haavon'ny fangatahana alohan'ny fiparitahan'ny coronavirus.
Ireo mpanamboatra ambony ao amin'ny tsenan'ny media fitateram-bahoaka itsinjaram-pahefana dia manery ny famoahana vokatra vaovao ary mampiasa vola amin'ny fampitomboana ny fahafaha-mamokatra mba hiteraka loharanom-bola vaovao.
Huida Medical, amin'ny maha mpamatsy fitaovana sy kojakoja ara-pitsaboana matihanina azy, dia tsy vitan'ny manome vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ny fitaovana sy fitaovana enti-mitondra swab, ary miezaka ny hohanin'ny laboratoara labwares plastika, afaka manome vokatra feno sy kalitao avo lenta izahay. . Tongasoa eto handefasanao fanadihadiana hahalalana bebe kokoa.